Talo Xumo Shicib Waa Tumaati Cadow!!!! Qalinkii Suxufi Abiib Iimaan Xasan | Hayaan News
Talo Xumo Shicib Waa Tumaati Cadow!!!! Qalinkii Suxufi Abiib Iimaan Xasan
Caaqil janan amra midkale oo u hiiliya wasiir hore oo wasiir hadda jooga u tiriya, shacbi iswada eegaya, dawlad shaqadeedii sugidii amaanka dalka lagu haysto, xisbiyo dhaliil ka dhiga meelo biri magaydo ah mararka qaarkoodna tuur uyeela xaajo ay toosin lahaayeen.
Dhamaan amuurahaasi waxay ka dhex muuqdaan dalkeena iyo dadkeena. Waxa hubaal ah haddii aynu sidaa kusii socono in aanay kabteen yeelmi doonin, toban sano ka hor somaliland waxay ahayd shacbi toosan iyo xisbiyo sax ah waxa guri qudha kasoo wada toosayey oday islaan iyo caruurtooda oo habeen odhan ka dooda saddexda xisbi ee ay kala taageersan yihiin waxaynu ahayn dimuqraadi hufan, hase yeeshee mar qudha ayeynu kasoo shalwanay figta ugu saraysa.
Qabiilooyinkeenii inoo ahaa number laysku garto oo kaliya waxa jifooyinkooda kamid noqday axsaab ku milantay reeraha, waxa yaable hadii aanu nahay reer hebel waxa na matalaya hebel iyo hebel oo isku lamaan miyeynu iswaydiinay oo miyaanay axsaabtu xaq ulahayn inay iyagu soo xulaan dad xariir ah oo aan looga baqan xatooyo xoolo umadeed malaha taasi dooni mayno.#Hayaannews